Kudengenyeka kwenyika kunorova Guatemala, nepo vanhu vakafa kubva pakuputika kwemakomo vanokwira kusvika makumi matanhatu nemaviri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Kudengenyeka kwenyika kunorova Guatemala, nepo vanhu vakafa kubva pakuputika kwemakomo vanokwira kusvika makumi matanhatu nemaviri
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Guatemala Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kudengenyeka kwenyika kwakakura 5.2 kwakanyorwa mamaira makumi matanhatu nemashanu (65km) kumaodzanyemba kweChamperico, dunhu riri kumahombekombe ekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweGuatemala, sekureva kweUS Geological Survey. Nekudengenyeka kwenyika kwakadzika mugungwa uye padyo negoronga regungwa rinozivikanwa seMiddle America ndiro muganho, hazvisi pachena kuti pane chero chakakuvara chakakonzerwa kumisha kana zvivakwa zvepasi. Chiitiko chekudengenyeka kwenyika chinouya maawa mashoma mushure mekuputika kwegomo reFuego iro rakauraya vanhu makumi matanhatu nemaviri nekumanikidza zviuru kutiza misha yavo.
Kudengenyeka kwenyika kunouya apo kuputika kunogona kunzwika kuchiuya kubva kuGuatemala's Fuego volcano zuva rese Muvhuro, ichifukidza nharaunda dzemunharaunda mudombo rinoputika nedota. Vanenge vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vava kutyiwa vakafa mune kuputika kukuru kunoonekwa panzvimbo iyi kubvira ma62.
Chiitiko ichi chakonzera kuti Mutungamiri weGuatemala, Jimmy Morales, azivise mamiriro ekukurumidzira.
"Tine vanhu chiuru nemazana maviri vari kuita basa rekununura," Morales akaudza vezvenhau Muvhuro. “Zvakare tinoshevedza vanhu vese kuti vasape ruzivo rwemanyepo. Usafungidzira nekuti izvozvo zvinongoomesa mamiriro acho ezvinhu. ”
Mukuvandudza Muvhuro, mamiriro emamiriro ekunze emamiriro ekunze akataura kuti kuputika kwakati wandei uye kwakasimba kwakabva mugomo kuchikonzera kuti mapundu emadota akwire kupfuura 15,000ft (4,600 metres) mumhepo.
Ipo chiitiko pacho volcano chadzikira kubva Svondo, iyo agency yakayambira nezvekuyerera-kuyerera kwemweya uye zvinhu zvemakomo mumipata iri padyo negomo. Chiitiko chekudengenyeka kwenyika chinowedzerawo mukana wekuti ivhu riri munzvimbo iyi rive risina kugadzikana.
Vanopfuura mamirioni 1.7 vanhu vakawirwa nenjodzi iyi, uye 3,265 XNUMX vakamanikidzwa kutiza misha yavo, sekureva kwesangano renjodzi yenyika Conred
Mifananidzo yemuchadenga yakaburitswa nehurumende yeGuatemala inoratidza kuparara kwakakonzerwa nekuputika. Mune mavhidhiyo akapfurwa kubva kuherikoputa, nzvimbo dzekumaruwa nedzimba dzekugara dzinoonekwa dzakavigwa pasi pemirwi yemoto unopisa uye nesipo.
Ose mauto nemauto emapurisa izvozvi vakanyoreswa mukati kuti vatsvage vakapona pakuputika.